महासंघको आन्दोलन नै बहसमा - Jhilko
महासंघको आन्दोलन नै बहसमा
२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको बारेमा तीब्र बहस चलेको छ ।
पत्रकारहरुको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले त यसका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।
विधेयक यतिवेला किन आवश्यक प¥यो ? त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा तालुकदार मन्त्रालयलाई सामान्य सोधपुछसम्म नगरी वा सचेत नगराई नेपाल पत्रकार महासंघ जस्तो साझा संस्थाले हतारमा आन्दोलनको घोषणा गरेकाले यो आन्दोलन पनि बहसमा परेको छ ।
नेपाली कांग्रेस यतिवेला सरकारका विरुद्ध जागरणका नाममा देशव्यापी अभियानमा छ । आन्दोलन खासै प्रभावकारी पनि छैन ।
यही नै बेलामा नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको पूर्व जानकारी, सचेत नगराई आन्दोलनमा गएकाले प्रमुख प्रतिपक्षको आन्दोलनको अजेण्डामा गएको भन्दै पत्रकारहरुमा मत विभाजन भएको छ । मुद्धा सही वा गलत बहस हुनसक्छ तर समयको हिसावले चितुवा कराउनु र बाख्रा हराउनु एकै भएको छ ।
आन्दोलन होइन छलफल र सहकार्यबाट मिडियालाई बलियो बनाउन सरकार र प्रेससँग संघ संस्था लाग्नुपर्छ ।
नेपाल पत्रकार जस्तो साझा संगठन त झन् कुनै पार्टीको भातृ संगठनको भूमिका जस्तो रुपमा विवादित बन्यो भने यसले साझा संगठनको चरित्र समेत गुमाउँछ ।
प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो कालमा स्वतन्त्र भूमिका खेल्न नसकेर कमजोर सावित भएको थियो । अदालतको विवादित फैसलाले केही वर्षदेखि नेतृत्वविहीन बनेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी नेपाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्ताव गरेको छ ।
सर्वाेच्च अग्नि परीक्षामा : द्वन्द्व भड्काउने कि शान्ति स्थापनाको पक्षमा फैसला ?
सिजनभर ३३ गोल गरेका फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनका स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पेलाई...